Mikasika ny Nenina sy ny Fanapahan-kevitra - Dieter F. Uchtdorf
Mikasika ny Nenina sy ny Fanapahan-kevitra
Nataon’ ny Filoha Dieter F. Uchtdorf
Mpanolotsaina Faharoa ao amin’ ny Fiadidiana Voalohany
Arakaraky ny hanokanantsika tena bebe kokoa amin’ ny fikatsahana ny fahamasinana sy ny fahasambarana no hampihena ny tranga izay mitondra antsika amin’ ny lalana mankany amin’ ny nenina.
Mikasika ny Nenina
Ry Filoha Monson, tianay ianao. Misaotra anao noho ireo fanambarana nentanim-panahy sy manan-tantara mikasika ny fanorenana tempoly vaovao sy ny asa fitoriana. Azoko antoka fa noho ireo zavatra ireo dia fitahiana lehibe maro no ho tonga amintsika sy amin’ ireo taranaka fara aman-dimby marobe ho avy.
Ry rahalahy sy anabaviko malala isany, ry namako malala isany! Mety maty daholo isika rehetra. Manantena aho fa tsy manaitra na iza na iza amintsika izany.
Tsy misy amintsika haharitra ela loatra eto an-tany. Manana taona sarobidy maromaro hiainana isika, ary ny isany, raha oharina amin’ ny mandrakizay, dia zara raha mitovy amin’ ny indray mipi-maso.
Ary avy eo dia lasa isika. Ny fanahintsika dia “entina mody any amin’ ilay Andriamanitra izay nanome aina azy.”1 Avela ao am-pasana ny vatantsika ary ilaozantsika ireo zavatr’ ity izao tontolo izao ity raha miroso mankany amin’ ny dingana manaraky ny fiainantsika isika.
Rehefa mbola kely isika dia toa ireny hoe hiaina mandrakizay ireny. Heverintsika fa misy famatsiana masoandro miposaka tsy misy fetra miandry ao ambadiky ny fara-vodilanitra ao, ary hoe toy ny lalana iray tsy misy fahatapahana izay mitohy tsy misy fetra eo anoloantsika ny ho avy.
Saingy arakaraky ny hitomboan’ ny taonantsika no mampirona bebe kokoa antsika hitodika any aoriana ary ho talanjona fa tena fohy tokoa ilay lalana. Manontany tena isika hoe tamin’ ny fomba ahoana no nahafahan’ ireo taona ireo ho lasa faingana aok’ izany. Ary dia manomboka mieritreritra momba ireo safidy izay nataontsika sy ny zavatra izay vitantsika isika. Mandritra izany dia tsaroantsika ireo fotoana mamy maro izay nanome fahafaham-po ho an’ ny fanahintsika sy fifaliana ho an’ ny fontsika. Kanefa dia tsaroantsika ihany koa ireo nenina—ireo zavatra izay iriantsika mba ho azo iverenana ary ovaina.
Hoy ny mpanampy mpitsabo iray izay mikarakara ireo marary izay eo amin’ ny dingana faran’ ny aretiny, hoe matetika izy no nametraka fanontaniana tsotra iray tamin’ ireo marary raha eo am-piomanana ny handao ity fiainana ity izy ireo.
“Misy zavatra hanenenanao ve?” izay no anontaniany.2
Rehefa antomotra toy izany ilay andro faran’ ny fiainana an-tany dia matetika mazava kokoa ny saina ary mahazo hevi-baovao na fomba fijery vaovao. Ka raha anontaniana mikasika ireo nenina ananany ireo olona ireo dia sokafan’ izy ireo ny fony. Nandinika mikasika izay zavatra ho novainy izy ireo raha mba afaka niverina tany amin’ ny lasa.
Rehefa nandinika izay nolazain’ izy ireo aho dia taitra hoe hatraiza no ahafahan’ ireo fitsipika fototry ny filazantsaran’ i Jesoa Kristy miantraika amin’ ny fizotran’ ny fiainantsika mankany amin’ ny tsara, raha mba hampiharintsika izy ireny.
Tsy misy zava-miafina raha ny amin’ ireo fitsipiky ny filazantsara. Efa nandalina azy ireny tao amin’ ny soratra masina isika, efa nifanakalo hevitra momba azy ireny tao amin’ ny Sekoly Alahady isika, ary efa im-betsaka isika no nahare azy ireny nandritra ireo fivoriam-piangonana. Ireo fitsipika sy soatoavina avy amin’ Andriamanitra ireo dia mahitsy sy mazava; tsara, sy lalina ary mahery vaika; ary tena azo antoka fa afaka manampy antsika hisoroka ny hisian’ ny nenina amin’ ny ho avy.
Inay Anie Aho Nandany Fotoana Misimisy Kokoa Niaraka Tamin’ ireo Olona Izay Tiako
Angamba ny nenina izay tena iraisan’ ny rehetra indrindra nambaran’ ireo marary eo am-bavahoanan’ ny fahafatesana dia ny hoe nirian’ izy ireo raha mba nandany fotoana misimisy kokoa niarahana tamin’ ireo olona izay tiany izy ireo.
Ireo lehilahy manokana dia niventsoventso izao alahelo iraisan’ ny rehetra izao: “nanenenan’ [izy ireo] mafy tokoa ny nandaniany fotoana betsaka loatra tamin’ ny anton’ asan’ izy ireo.”3 Maro no tsy nanana fahafahana akory hanana fahatsiarovana mamy izay azo avy amin’ ny fandaniana fotoana iarahana amin’ ny fianakaviana sy ny namana. Tsy nahavita nanorina fifandraisana lalina tamin’ ireo olona izay nanan-danja indrindra taminy izy ireo.
Tsy marina ve fa matetika isika no be atao tokoa? Ary mampalahelo ny milaza fa tena raisintsika ho voninahitra mihitsy aza izany hoe be atao izany, toy ireny hoe ny maha-be atao dia tanjona tsara ho tratrarina na mariky ny fananana fiainana ambonimbony kokoa.
Sa tsy izany?
Mieritreritra an’ ilay Tompontsika sy ohatra tonga lafatra ho antsi